Rn7: karandalina nivadika, nahafaty zaza efa-taona | NewsMada
Rn7: karandalina nivadika, nahafaty zaza efa-taona
Nivadika indray ny taksiborosy Karandalina iray tany amin’ny lalam-pirenena fahafito. Vokatry ny fandehanana mafy, izay nolazain’ny olona fa niloka ny saofera, ny nahatonga izany. Nahafatesana zaza iray, ary mbola maro ny olona atahorana ny ainy tamin’ity loza ity.
Nivadika ambony ambany ny kamiao taksiborosy Karandalina an’ny kaoperativa Besalama, tany amin’ny lalam-pirenena fahafito, teo anelanelan’Ilakaka sy Ambovombe, ny asabotsy teo. Fantatra fa namoy ny ainy tamin’izany ny zazakely efa-taona. Ampolony maro kosa ireo naratra mafy, ary atahorana ny ainy, nentina any amin’ny hopitaly. Voalaza fa vokatry ny fandehanana mafy ny nampivadika ilay fiarabe. Navesatra ny fiara, feno hipoka ary nitondra enta-mavesatra. Nitodi-doha ho any Toliara ity Karandalina ity izao niharan-doza izao. Araka ny fanazavan’ny vavolombelona tany an-toerana, nisy loka vola nataon’ireo mpamily ho an’izay tonga aloha any Toliara kanjo izao niharan-doza izao. Nisy aza ny nanakiana fa efa fanaon’ireo mpamily ny fandehanana mafy amin’iny lalam-pirenena fahafito iny, ary mifoka rongony mihitsy izy ireo.
Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny famotorana. Nifamonjena ny nisokitra ireo olona tery tao ambany fiara. Nijanona ny fiara, nandalo nanome tanana tamin’ny famonjena ireo naratra rehetra. Marihina fa mampitohy an’Ilakaka sy Ambovombe Androy ny fiara, na Ambovombe sy i Toliara. Notanan’ny zandary ny mpamily izay tsy namoy ny aina tamin’izao loza izao.
Efa mpiseho matetika loatra ny loza ateraky ny fiarabe tahaka izao any amin’iny faritra atsimo sy Atsimo Andrefana iny. Vao ny volana jolay teo, tany Betioky Atsimo, fiara tahaka ity voalaza etsy ambony ity nivadika ka nahafaty olona 20. Olona 30 naratra mafy tamin’izany. Mbola mitondra takaitra avokoa ireo olona naratra ireo hatramin’izao.
Amin’ny ankapobeny, tsy voaara-maso ny momba ireny fiara mitatitra amin’ireo lalam-pirenena saro-dalina sy lavitra ireny. Ity karazana fiara ity rahateo no hany miasa amin’ireny lalam-pirenena ireny. Manao ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.